Global Voices teny Malagasy » “Miala fa raha tsy izany…”: Na ny endri-pamoretana mahazo ny gazety ao Madagasikara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Aogositra 2009 20:40 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Madagasikara, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Zon'olombelona
Tanora miasa ao amin'ny fanaovan-gazety lehibe iray i VNR. Nafeniny ny laharam-pindainy tamin'ny voalohany niantsoany ahy haontaniany izay antony hitadiavako tafa aminy. Nanaiky ny hihaona tamiko, teny amin'ny toerana be mpandalo eny Anosy Antananarivo, izy sy ny namany mpanao gazety ihany koa ka eny indray no mijery toerana ahafahana miresaka malalaka. Fomba fiteny fotsiny ny hoe miresaka malalaka fa sady mibitsibitsika izy mirahavavy nandritra ny ora roa niresahana no niherikerika be ihany. Sarotra dia sarotra ankehitriny izany hoe miresaka malalaka izany eto Madagasikara. Be loatra ny fisambotsamborana amin'ny tsy antony nandritra izay volana vitsivitsy izay, be loatra ireo olona miafina noho ny fihazana ireo mpanohitra politika. Efa nisy ny tatitra navoakan'ny Reporters sans frontières amin'ny faneriterena mahazo ny media eto Madagasikara . Mety hoe tsy hita intsony eo amin'ny lohateny lehiben'ny gazety eto an-toerana ny krizy eto Madagasikara. Tsy milaza izany fa tsy misy intsony ny zavatra tokony hotaterina fa eo dia eo ny fangejana mahazo ny mpanao gazety raha vao misy ny fanadihadiana ataony momba ny fihoaram-pahefan'ny mpikambana eo amin'ny governemanta tetezamita, arovan'ny miaramila ankehitriny.
Milaza sompirana ny iray amin'ny olana  mianjady amin'ny mpanao gazety eo am-panatontosana ny asany ny mpamaham-bolongana Malagasy Cyber Observer :
” Tsy nazoto ny hiresaka aminao izaho sy i TM (namana miasa amin'ny fanaovan-gazety hafa sady mpanolotra vaovao tao amin'ny topmada.com ) tamin'ny voalohany satria mihasarotra ankehitriny ny mitady olona azo itokisana ao anatn'ny holafitra. Nilazana aho roa herinandro lasa izay fa safidiko samirery raha hiampanga ny fihoaram-pefy ataon'ny fitondrana ankehitriny aho, fa tsy tokony hiharan'ny vokatry ny safidiko kosa ny ekipa, noho izany dia izaho irery ihany no tompon'andraikitra amin'ny lahatsoratra soratako. Nanadihady ny fandrombahan'ny governemanta ankehitriny ny zava-pihinana ilain'ny mponina vokarina orinasa tsy miankina iray aho. Nanatona ahy ny tonian'ny lahatsoratro fa tsy arendrika miaraka amiko kosa ny gazety, fa raha te-hamono ny asako aho, dia tsy (mahazo alalana) hisintona ny gazety hiara-maty amiko. Efa nanao fanadihadiana tamin'ity tranga iray ity ihany koa i LA, mpiasa amin'ny fanaovan-gazety hafa. Niditra tany amin'ny biraon-dry zareo ny mpitandro ny filaminana dia nilaza mazava tamin'i LA fa : “miala fa raha tsy izany…”. Tsy navoaka manontolo na izay nosoratako na izay nosoratany.”
Mazava loatra fa tsy nanaiky ny hampisehoana ny anarany na ny gazety iasany ny mpanao gazety. Fa tsy niraharaha ny hiafin'anarana intsony ny iray amin'izy ireo dia i Evariste Ramanantsoavina, mpanao gazety tao amin'ny Radio Mada teo aloha rehefa notaritaritina ampahibemaso ny anarany. Notantarainy ny fandehan-javatra tamin'ny nisamborana azy tamin'ny 5 mey , sy ny fomba nahafahany ary ny fomba fijeriny momba ny fanaovan-gazety mandritra ny krizy:
Nahatsiaro ny andro nidiran'ny miaramila ny birao fiasan'ny MaTV tsy misy taratasy fahazoan-dalana ny mpanao gazety RL miasa ao hikaroka sary mampivandravandra ny fampiasan'ny miaramila basy tafahoatra. Nilaza tamin'ny ekipan'i MaTV ny Komandà Charles Andrianasoavina, ilay nalaza tamin'ny fandrahonana ny diplaomaty vahiny tamin'ny 17 marsa ka anisan'izany ny masoivoho amerikana Niels Marquardt , tsy hamoaboaka sary miaramila intsony fa raha tsy izany dia akatony ny televiziona:
Maro tamin'ireo vaovao ireo no tsy fantatry ny olona fa nafenina tamin'ny fomba isan-karazany, toy ny tamin'ny alalan'ny fandrahonana, kolikoly na fampitahorana. Tsy vitan'ny hoe tsy mbola tafajoro eto Madagasikara ny kolontsaina tia mangarahara fa mbola atosaky ny fitondrana amin'ny olona ihany koa ny vaovao mampiahiahy ny fahamarinany. Ohatra iray amin'izany ny famoahana ampahibemaso tamin'ny 21 jolay ny anaran'olona dimy , nambara ho atidohan'ny fametrahana baomba ao Antananarivo raha ao nolazaina fa nisy baomba hita ora vitsy mialoha io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/08/02/2867/
 faneriterena mahazo ny media eto Madagasikara: http://www.ifex.org/madagascar/2009/07/08/ramambazafy_death_threat/
 iray amin'ny olana: http://andrydago.wordpress.com/2009/07/16/the-state-of-media-freedom-in-francophone-africa/
 fandehan-javatra tamin'ny nisamborana azy tamin'ny 5 mey: http://africa.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-arrest-of-journalist-in-madagascar
 ilay nalaza tamin'ny fandrahonana ny diplaomaty vahiny tamin'ny 17 marsa ka anisan'izany ny masoivoho amerikana Niels Marquardt: https://globalvoicesonline.org/2009/04/01/causes-and-consequences-of-the-coup-in-madagagascar/
 famoahana ampahibemaso tamin'ny 21 jolay ny anaran'olona dimy: http://twitter.com/lrakoto/statuses/2742434982